Waalidiin dib looga codsaday iney dhaqaale soo celiyaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xafiis ka mid ah xafiisyada hayadda ceeymiska qaranka. sawir: Sawirle: CHRISTINE OLSSON / TT
Waalidiin dib looga codsaday iney dhaqaale soo celiyaan
La cusbooneeyay fredag 7 oktober 2016 kl 12.17
La daabacay fredag 7 oktober 2016 kl 11.46
Dhaqaale gaarsii-san 74,5 oo malyan oo koroon ayaa illaa hadda sannadka dib looga dalbaday dadyoow gaarsii-san 1 871 oo looga tuhun qabo iney is-daba maris ku sameeyeen dhaqaalaha lagu qaato ilmaha xanuun-san.
Dhaqaalahaa ayaa ah mid siddeed jeer ka sarreeya dhaqaalihii dib loo codsaday ee saddexdii bilood ee sannadka ugu horreysey kolka loo barbar-dhigo dhiggooda ee sannadkii 2014, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter.
Dhaqaalahaasi ayaa ah mid aad uga tira badan kolka loo barbr-dhigo wixii ka horreeyay intii aanay hayadda ceeymiska qaranku nidaamkan cusub ee baaritaanka aanay ku tallaabsan gabagabadii sannadkii ina dhaafay. Iyada oo uu baaritaankani salka ku hayo dadyoowga musuqmaasuqa gunnada loo qaato dhallaanka xannuun-san.
- Shakhsi noocan ah markaannu ogaanno ayaannu dhowr sannadood dib ugu noqonnaa. Markaa ayaannu heli karnaa sawirka dhabta ah, sida uu sheegay Niklas Löfgren, ahna af-hayeenka waaxda dhaqaalaha qooysaska ee hayadda caymiska qaranka.